fiber Glass xoojiyeen sheet saqafka cusbi RY720-B - Shiinaha Hubei Shengyu Dhismaha Qalabka
FOB Price: 5.65-9.99 / mitir oo laba jibbaaran
Shengyu sheet saqafka cusbi dardaro, dahaarka leh kula cusbi Geloy ASA, waa 3-lakabka xaashi co-extruded gaar ah saqafka. saqafka dhaqanka dusiyeen hannaankii midabyo hodan ku bulukeeti iftiin arrintaasna waa u fududahay in la rakibo. Waa bulukeeti aad u adag ah, adkaysi u dabaysha iyo roobdhagaxyaale, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa, halkaas oo loo baahan yahay arrin sare esthetic. Waa maxay more, waxaa weli deggan midabka iyo guryaha jirka ka yar aalladda buluug shucaaca, waxaa qoyay, kulaylka, chillness iyo saamaynta.
3.0 ± 0.1mm 720mm 640mm 660mm sida looga baahan yahay (multiple abyoonaha of 219) 0.1kg ± 6kg Matte ama dhalaalaya Blue, Bright Red, Gray, Deep Red, Terracotta
Sida wax lakabka sare, Geloy cusbi injineernimada by GE sameeyey waa caadi ahayn ku haboon isticmaalka dibadda. Xitaa bandhigi shucaaca aalladda buluug, waxaa qoyay, kulaylka, chillness iyo saamaynta, badeecada sii xasiloonida ee midabka iyo guryaha jireed. Baaritaano lagu qabtay xarunta Test Gabowga ee Arizona iyo Florida cadeeyo in uu ka yar yahay △ E 5 10 sano gudahood.
Shengyu sheet saqafka cusbi dardaro uu leeyahay awood xoog leh oo ah dhalista culus. Baaritaanku, ay qabatay Shanghai degmada Dhismaha Waxyaabaha Qeybta Kormeerka Tayada iyo Test Station, waxay cadeyneysaa in aysan jirin crack xaalad of 660mm taageeraya taako iyo load 150kg codsatay.
Mid ka mid ah xabbad caadiga ah ee 720mm sheet saqafka culeyskiisu yahay 5.9 ± 0.1kg.
Next: temperatuer High & daxalka sheet saqafka iska caabin
Inta lagu guda jiro qabashada, badeecada waa in aan la dumin doonin si looga fogaado in waxyeello ama gunta sheyga. Waayo, sheet hal muddo ka badan 8 milyan, dhibcood taageeraya filan waa lagama maarmaan si looga fogaado qoslaan ee leben.
Fadlan soo shirin caag giraanta biyuhu galeen goomahooda hor qamaar boolal roof.The waa in aan la ku xidhnaa aad tightly.Finally ku hardiyi daboolka biyuhu gal boolal ku xidh.
boolal waa in la vertical go'an in surface.Screws xaashida la loo baahan yahay dhererka of dhexroor 75mmand ee 6.3mm si uu u xaliyo leben ugu weyn.
Sheet cusbi Shengyu waa ay khuseyso in ay xabbado saqafka 20 ilaa 80.For garoonka ka baxsan kala duwan this, tallaabooyin gaar ah waa in la qaato inta lagu guda jiro rakibaadda.
1. Qaab-dhismeedka huwataa
oogada ee sagxad ah waa in siman, wax ka mid ah sagxad ah waa in ee lahayo ku yar, sagxad ah waa in ka badan 12mm qaro weyn (sida ay taako purlin ah).
Farqiga A 3-5mm u dhaxaysa laba tu muhiim u tahay calaamadaha lahayo.
The duub biyuhu waa in si habsami iyo vertical midkasta oo la overlaps sax ah.
2. Dhismaha Steel
The xaglo-dhismeedka steel waa in si hufan ay gacanta inta lagu guda jiro processing, taas oo saamayn ku yeelan doona garoonka of saqafka. Weecasho ee xaglo dhigi doonaa saqafka ah sinnayn.
Cali steels waa in ay ahaataa anti-daxalka loola dhaqmo.
3. sii xoojiyeen-dhismeedka la taaban karo
underlay ee la taaban karo aan lahayn saamayn muhiim ah oo ku saabsan evenness ee saqafka, halka qobays gundhig iyo purlins waa in aad u nidaamsan iyo in diyaarad.
Labada steel iyo qori gundhig qobays iyo purlins waa in ay anti-daxalka lagu daaweeyaa in la kordhiyo nolosha ah ee qaab-dhismeedka saqafka.
Purlins Steel waa in loo welded si qobays steel gundhig iyo purlins qoryo la qodbay kartaa inay qoryo soo gundhig si toos ah qobays ah.
Attention! No leben saqafka gabi ahaanba xal u heli karo dhibaatada xireyaashaba keligeed, waayo, guryaha caadiga ah, waa inuu jiraa underne
1. daaweyn Anti-daxalka: purlins Birta waa in la dahaarka leh kula hal lakab oo rinjiga anti-miridhku iyo labo lakab oo blaastiigga ku dhameysteen. Purlins Wood waa in la dahaarka leh kula anti-daxalka ama saliid laami.
2. purlin ugu sareeya waa in ay leeyihiin 180mm meel fog ka soo line xigtaa si ay u rakibi dusiyeen xigtaa ah.
3. purlin hoose waa in ay leeyihiin meel fog 50-70mm ka helee ah.
4. meel purlin waa 660mm for Tile Royal.
Toosan Heat Expansion
Shengyu sheet saqafka cusbi ayaa Wehliyaha ka mid ah ballaarinta toosan ee 0.0000493 / ℃ .Si ay u oggolaadaan ballaarinta toosan caadiga ah ee xaashida, waxa aanu kugula talinaynaa in qodo god leh dhexroor 2-3mm weyn yahay kii fur, ka dibna dhigi qamaar si fogaado Dilatation mid ka mid ah sheet.Please ma dhigi qamaar aad u adag u xidh.
Rakibaadda Of Tile Main
in lays saxda ah waa mid aad u muhiim ah in aan ku xirnayn nooca dhismaha saqafka, taas oo keliya shabaqa la si dhow u soo ururay oo karo iyo straightly line The toosan waa in ay ahaataa 50 ~ 70mm inay gudaha ee sidewall saqafkiisa a gabled, iyo 150mm line siman in purlin hoose .
Ku rid xaashida ugu horeysay sida ugu dhow ee suurto gal ah in line dhismaha toosan, hagaajin gal leben koowaad ee Safka labaadna toosan, sida laga soo xigtay taageeraya framework.The safka kowaad waa xaalad lama dalool.
Fixings waa in la soo ururay oo goday la ruxruxo ee leben ah.
u baahan yahay daryeel gaar ah in la qaado marka simaya safka kowaad, sababtoo ah on go'yaal dheer xataa dahaarka ah off of a milimitir yar warqada kasta oo abuuri kara dhibaatooyin.
Ka dibna tag on in ay sameeyaan qamaar labaad, daboolaa sheet labaad ka hooseeyaaba gal ugu horreeyey iyo hagaajin la boolal is on leben ugu horeeyay ee ugu hooseeya taas oo u dhiganta xirmi ah.
Si aad in lays saxda ah ee fixings ah waxaan ku talinaynaa isticmaalka line ah tixraaca go'an inay xad-dhaaf ah ee rafter ah.
Continue si la mid ah la go'yaal saddexaad oo soo, iyo dib-u-hubiso xaaladda ka mid ah shabaqa ilaashatay afar kulan, ka dibna hagaajin on leben kale oo kasta.
Urursada go'yaal si la mid ah ilaa hal final, haddii loo baahdo, width ee sheet ugu dambeeya ayaa laga yaabaa in la sida la gooyaa.
Attention! sheet kasta waa in la soo ururay oo sida ugu dhow ee suurto gal ah in mid ka mid ah dabooleen.
Waayo, Safka labaadna waxaan sida had iyo jeer in aad bilowdo ka bidix la xaashi in la jaro in kala bar lengthways (saddex saf oo marmarka) talinaynaa .Tani waxay kuu ogolaanayaa inaad sii xirmi ka siman of saf biloway, iyo sida oo kale aad ka fogaato crossover a afar kulan shabaqa ku xirmi ah.
The go'yaal haray jaray bilowgii aan la khasaariyey sida ay loo isticmaali karaa dhamaadka saqafka sida hagaajin.
Buuxi dhinaca ka soo horjeeda si la mid ah.
Saf ka saf toosan ee marmarka dhinaca ka soo horjeeda kuwa hore oo kale, si ay u soo shirin leben xigtaa ah.
Attention! Waayo, jiirada hoose ama goobaha gaar ahaan dabaysha ama rainly ay habboon tahay in la shaabadeeyo xirmi ah by daweyn dumin kara ama daweyn Silicon.
Oo dhinaca xagal of saqafka afar dhaadhaca ah, sheet ugu horreysa waa in lagu soo bilaabo dhexe, ka dibna sii wadaan in ay jiho bidix iyo midig labadaba.
Iska yaree go'yaal weheliyaan line misigta in asesemble xigtaa dadab
Rakibaadda ee leben xigtaa waa in ay bilaabaan ka mid side.For leben ugu horeysay, waa in la kala badh jaray si looga fogaado crossover afar kulan shabaqa ku xirmi ah.
Is-boolal dherer ah 75mm iyo dhexroor ee 6.3mm loo baahan yahay si uu u xaliyo leben xigtaa galay daryeelka ugu weyn tile.Take ma si uu u xaliyo xigtaa dhow cidhifka oo sidaas daraaddeed ma u leedahay dhibaatooyin dhexgalka.
Sida in la rakibo of xigtaa dadab, waa la toosiyaa waa in ay si toos ah ula hip dhawraan line.Self-boolal dherer ah 75mm iyo dhexroor ee 6.3mm ayaa loo baahan yahay si uu u xaliyo cidhifyada prefabricated in ay leben xigtaa tile.Diagonal ugu weyn waa in lagu dhejiyaa ka hooseysa in ay hogaanka la xirmi ee 50mm.
A xiriir saddex hab waxaa loo isticmaalaa sida element ugu soo biiray dhexeeya xigtaa ku toosan iyo mid ka mid ah dadab saqafkiisa waa afar jiirada a.
Comer The abuuray by soo biiray laba garoomada wada waxaa la yiraahdaa valley.Position iyo hagaajin laba strips isku midka ah, 240 mm ka ah xarunta of Comer ah, siman tahay Comer dooxada.
Hagaajin biyomareenka dooxada sameeyey guddi cusbi dardaro ama biraha on strips isticmaalaya is-boolal ama ciddiyaha.
Galvanized dooxada duudduuban sidoo kale loo isticmaali karaa waxa gutter.Position dooxada on geeska laga bilaabo line xigtaa ah, dhacna hoos si taxadar leh ku slab.Begin ah si uu u xaliyo cidhifyada xad-dhaaf ah ee dooxada on strips isticmaalaya is-boolal ama ciddiyaha.
The go'yaal u dhiganta line dooxada waa in la hor-qaabeeya hor qabto, laakiin tagay waxaa macquul ah in ay mar kale ku deldel, ka dib markii la diyaariyo, in ay leeyihiin line a dooxada dhammaataan isku xigta.
Connection Iyadoo Wall
Isticmaal sidewall biligleynaya sameeyey Shengyu guddi dumin kara ama biraha, soo shirtagi doono guddiga biligleynaya in derbiga iyo jilay by is-boolal ama ciddiyaha iyo xir dhamaadka sare ee biligleynaya la daweyn Silicon.
Connection Iyadoo qaaca
Isticmaalka sidewall biligleynaya sameeyey Shengyu guddi dumin kara ama biraha, soo shirtagi doono guddiga biligleynaya in derbiga iyo jilay by is-boolal ama ciddiyaha iyo xir dhamaadka sare ee biligleynaya la daweyn Silicon.
Isticmaal cusbi dardaro ama flashings biraha, soo shirtagi doono guddiga Ilbidhiqsi in derbiga iyo jilay by is-boolal ama ciddiyaha iyo xir dhamaadka sare ee biligleynaya la daweyn Silicon. (Eeg jaantuska sare)
Flashings waxa lagula talinayaa in loo hawl goobta by guddiga biraha, sida garoomada saqafka iyo jagada shooladaha waa variable for Saanqaag Fidlo ah oo kala duwan.
Aluminum ama galvanized duub sidoo kale loo isticmaali karaa xidhiidhka ka dhexeeya dusiyeen iyo chimney.Stick duub si go'yaal oo dhan ku wareegsan chimney.Fix ah iyo darafkiisa kale inta duub in shooladda by musmaarro iyo markaas xir dhamaadka sare.
Connection Iyadoo Skylight
go'yaal waa in la soo ururay sidii caadiga ahayd ilaa qaadan meel u dhow skylight ah.
Qaado cabirka saxda ah ee skylight ah, ka dhigi Afyare sax ah on sheet la polisher dabacsan ama la qaadi karo miinshaar dhuuban-ilig.
Daboolaa faseexad hoggaamisa xiriir hoose on xaashida goolad oo u qaabaynta gacmahaaga si fiican u haboon xaashida.
Markaas, ku rid xaashida u qaabeysan, waxaa sidoo habboona in kooxda iyo xidhiidhada sare oo xirmi in qayb ka, iyadoo sakaraad oo ka mid ah xubno ka liita faseexad hogaanka dhinaca hoose ee skylight ah.
Markii uu dhamaystay geynta ee xigtaa dadab, gelin meel terminal dadab xigtaa galay dhamaadka hoose ee xigtaa dadab, iyo hagaajin si xigtaa ay dadab by rivets.
Tile uu saqafku Curved
Sheet saqafka Curved
Fiber jiingado Sheet uu saqafku dumo
Fiber caaga uu saqafku dumo
Sheet Fiber Waayo, saqafka
Maro adag saqafka Qalabka
Sheets Maro adag Skylight
Dabka Retardant caaga Sheet uu saqafku dumo
Green Maro adag saqafka
Sheet Long taako saqafka
Modern Tile saqafka Qadiimiga ah
Multi Color PCV Sheet uu saqafku dumo
Plain Nooca baasaboorka Sheets uu saqafku dumo
Sheets uu saqafku Garage caaga
Sheet caaga-PCV saqafka Waayo daadiyaan
caaga Sheet uu saqafku dumo
caaga uu saqafku Tile
Tile uu saqafku guduud
PCV Waxyaabaha Dhismaha Qalabka uu saqafku ka dusiyeen
PCV caaga uu saqafku Sheet
PCV caaga uu saqafku Tile
PCV uu saqafku Sheet Profile
Sheet PCV saqafka
PCV saqafka Tile
Protection Roob Sheet saqafka
Sheets uu saqafku Price Per Sheet
Sheets shingles saqafka
Royal caaga uu saqafku ka dusiyeen
Sheet saqafka Transparent
Trapezoid Sheet uu saqafku dumo
Trapezoidal Style uu saqafku Tile
Sheets ruxruxo saqafka shingles
Sheets White Maro
Workshop uu saqafku Tile